War Laga Soo Saaray Xildhibaan Lagu Rasaaseeyay Muqdisho | SAHAN ONLINE
War Laga Soo Saaray Xildhibaan Lagu Rasaaseeyay Muqdisho
MUQDISHO : Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xildhibaan lagu xabadeeyay shalay galabnimadii abbaarahihii 5: 30 Galabnimo ee taariikh 23-May ka dhacay barta koontaroolka Ciidamada Amniga ay ku leeyihiin KM 0 ee Magaalada Muqdisho.
Wasaaradu waxay dhacdadaasi ku tilmaamtay shil, waxayna sheegtay in goobta ka dhacday hal xabbad oo kaliya taasoo askari ka tirsan ciidamada uu kor ugu riday digniin ahaan kadib markii uu ka shakiyay gaari ka gudbay barta kontorool, waxayna sheegtay in ay billowday baaritaan dhacdadaas la xiriir.
Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Nuur oo ka tirsan gollaha shacabka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in gaarigiisa uu xabad ku riday askari ka tirsan NISA oo ilaalo ka hayay Barta kontorool ee KM 0 ee Muqdisho. wuxuuna bartiisa Facebooga ku soo qoray in si bareer ah loogu soo riday Xabada
Bayaan wasaaradda waxaa kaloo lagu sheegay in Ciidamadu ay amar ku qabaan in ay ilaaliyaan amniga Xildhibaannada iyo Mas’uuliyiinta Dowlada, isla markaana dhowraan xasaanadda Xildhibaannada labada Gole ee Baarlamaanka oo laguma xad gudbaan ah.
“Wasaaradda Amniga waxay aad uga xun tahay wararka aan salka lahayn ee laga faafiyey ciidamada amniga, waxayna ugu baaqeysaa dhammaan Xildhibaannada iyo Mas’uuliyiinta Dowladda oo dhan inay iska ilaaliyaan faafinta iyo ka qeyb qaadashada wararka lidka ku ah ciidamada oo khalkhal gelinaya xasiloonida iyo Dowladnimada” ayaa lagu yiri bayaanka Wasaaradda Amnigu ay ka soo saartay dhacdadaasi.